waxaa laga xusay magaalada badan 19 guurada ka soo wareegtey aasaaska puntland – Golaha 1960
waxaa laga xusay magaalada badan 19 guurada ka soo wareegtey aasaaska puntland
Mohamed Hassan | August 3, 2017 | Arrimaha-Bulshada | No Comments
Xafladan oo la isugu hanbalyeeyey munaasabada 1 da Ogost ayaa waxa goob joogeyaal ka sheekeeyeen asaaskii Punland ee 1998kii iyo muhimada ay u leedahay guud ahaan Soomaali iyo gaar ahaan reer Puntland.
Sidoo kale waxa masuuliyiintu ka warbixiyeen waxqabadkii dawlada Puntland ee gobolka Sanaag mudadii uu Xafiiska Madaxtooyada joogey Mudane Madaxweyne Prof. C/weli Maxamed Cali Gaas .
Waxyaalaha carrabka lagu dhuftay ayaa waxa ka mid ahaa :
– Dhismaha 4 wasaaradood oo kala ah haweenka , Degaanka , Waxbarashada iyo Xannaanada xoolaha , iyo sidoo kale Saldhiga Booliska degmada Badhan .
– Dhismaha 7 xarumo bulsho ( community centres) iyo suuqa xoolaha ee magaalada Badhan
– Baalleyaasha cad ceedda ku shaqeeya oo lagu xidhay Magaalada Badhan , Hospitalka Xingalool iyo Hospitalka Badhan.
– Dhismaha 6 iskuul , iyo dayactirka 11 iskuul oo kale .
– Qalab caafimaad iyo dawooyin la keenay Hospital ka magaalada Badhan iyo MCH yada gobolka.
– Hirgelinta 5 ceel biyood oo kala ah Booddacad , Damallaxagare , Cawsane , Badhan iyo Daarasalaam , sidoo kale dayactirka lix ceel oo kale ‘( Hadaaftimo , Ceelbuh , Xingalool , Carmale , Habarshiro iyo Yubbe).
– Furitaanka xarunta nafaqada caruurta oo 2 dii bilood uu furnaa lagu nafaqeeyey 50 caruur ah oo la il darraa nafaqo daro.
– Sidoo kale 600 hooyooyin ah iyo 3000 caruur ah oo iyagana nafaqayn loo sameeyey xilligii abaarta iyo ilaa hadda oo dhammaan gobolka oo dhan ah.
– xilligii abaarta oo 73,831 qoys biyo dhaan loo sameeyey , 22,416 oo qoys na raashin iyo lacag loo qaybiyey welina qaarkood loo wado iyo 4,945 qoys oo daaweyn bilaash ah helay.
– Futitaanka xafiiska Socdaalka iyo Jinsiyadaha .
– Hirgelinta dhismaha Jaamacadda Maakhir , iyo u magcaabida Prof. Caalin Axmed Faatax si loogu shaqeeyo dhismaha cusub loona ballaadhiyo tacliinta iyo tayada Jaamacada.
– Dhismaha Wadada barakaysan re Ceeldaahir- Ceergaabo ee uu Madaxweynaha barakaysani ku dhawaaqay dhaqaale iyo maskaxna ku bixiyey.
– Dayactirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Badhan iyo ka shaqaysiintiisa .
– Biyo gelinta magaalada Badhan ee hadda socota .
Intaa waxa dheer mashaariicda nolol dhisidda ah ‘(Livelyhood) , dhowrista caruurta ah , Kulamada cayaareed ee dhallinyarada loo sameeyey ah , mashaariic kalluumaysi , dayactir harooyin iyo ceelal gacmeed ah ee gobolka ka socota oo aan qoraal lagu soo koobi karayn .
Waxqabadkaas oo dhammi wuxu gobolka Sanaag ka hirgalay mudadii 4 sano ahayd ee uu Dawlada Puntland Madaxweynaha ka ahaa Mudane C/weli Maxamed Cali Gaas , bulshadii xafladda isugu timid na ay uga mahadcelisey dawlada Puntland , waxyaalo kale oo in dhowaan la hirgeliyo oo horumar ahna waa la rajeynayaa oo ay ka mid tahay Dekedda kalluumaysi ee Laasqoray.
← Gabaygii Abdiqaadir Biriir ” Dhuuntaha dhabarkiisu muuqdo
baaq nabadeed Buuhoodle/odayaasha,maamulka iyo aqoonyahanada golaha1960
wasiirka maaliyada somaliland oo dadka gobolka sool ku sheegay dad aan diin lahayn
Akhriso jadwalka/ xariga Mukhtaar kadib gudiga doorashada madaxweynaha soo saaray Jadwalka Doorashada KG